साइप्रसबाट नेपालमा यसरी खोल्नुहोस अनलाइन बाट बैंक खाता | साइप्रस नेपाल डट कम
समिम मियाँ/ लिमासोल
“नेपाली को साइप्रस जिन्दगी ” फेसबुक ग्रुप मा धेरैले सोध्ने गरेको प्रश्न हो ” साइप्रसबाट नेपाल मा खाता खोल्न मिल्छ ?”
आउनुस् आज हामि यसको उत्तर सहित सबै जानकारी तपाइँलाइ दिने छौ।
साइप्रस र विश्वको जुन सुकै देशबाट नेपालका बैंक हरुमा खाता खोल्न मिल्छ। अनलाइन निवेदन फारम बारेको २४-४८ घण्टा भित्र कागजात पुगे वा मिलेमा शुन्य रुपैया पनि खाता सजिलै खुल्छ। खाता खोल्ने बितिकै तपाइलाइ खाता नम्बर दिइने छ जसमा तपाइले मसारी, क्यासलाइन वा अन्य अनलाइन बाट पनि पैसा जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ। आज यस लेख मा तपाइँ हरुलाई साइप्रस बाट सानिमा बैंक मा खाता कसरि खोल्ने बारे स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। सानिमा बैंक बाहेक अन्य थुप्रै बैंक मा पॉनि खाता खोल्न सकिन्छ। नेपालको कुन कुन बैंक मा अनलाइन खाता खोल्न सकिन्छ यहा क्लिक गरि हेर्नु होला।
सानिमा बैंक मा खाता खोल्न के के कागजात चाहिन्छ ?
एक पासपोर्ट साइजको डिजिटल फोटो
नागरिकता वा पासपोर्टको फोटो
अब सुरु गरौ है त।
गुगल क्रोम ब्राउजर मा जानुहोस् र sanima bank लेखेर सर्च गर्नुहोस्
Sanima Bank Limited देखिएको पहिलो लिंक लाइ क्लिक गर्नुहोस्
अब तपाइँ सानिमा बैंक को वेबसाइट मा पुग्नुहुनेछ
APPLY FOR ONLINE ACCOUNT मा क्लिक गर्नुहोस्
देखिएका विभिन्न अप्सन मध्ये OPEN A NEW ACCOUNT मा क्लिक गर्नुहोस्।
शुन्य बचत म खोल्न मिल्ने ४ खाता मध्य कुनै एक रोज्नुहोस र APPLY गर्नुहोस्
Sanima Sampanna Bachat Khata
Sanima Nari Bachat
Sanima Sulav Savings
रेमिटेन्स खाता खोल्न APPLY गरेपछि यस्तो फर्म खुल्छ जसमा तपाइले निम्न जानकारी भर्नु पर्छ
जन्म मिति (अग्रेजी AD वा नेपाली मिति BS)
START ACCOUNT OPENNING FORM मा क्लिक गर्नुहोस्
अब अर्को फर्म खुल्छ यसमा तपाइले आफ्नो सारा विवरण भर्नु पर्छ। देश भरि सानिमा बैंकको ८५ ओटा ब्रान्च छ। पहिला कुन ब्रान्च मा खाता खोल्ने हो त्यो छान्नुहोस्।
ब्रान्च कहाँ छ कहाँ डिटेलमा हेर्न यहा क्लिक गरि हेर्नुहोस्
त्यस पछी तपाइले निम्न विवरण अंग्रेजीमा क्यापिटल मा भर्नु पर्छ
यो बैंक मा खाता छ त ? छ /छैन
टेलिफोन वा मोबाइल नम्बर (साइप्रसको मोबाइल नम्बर राख्नुहोला )
लिङ्ग : महिला /पुरुष वा अन्य
नागरिकता वा पासपोर्ट नम्बर
जारि भएको स्थान (नेपालबाट बनाउनु भएको भए जिल्लाको नाम KATHMANDU ) विदेश बाट पासपोर्ट रिन्यु गर्नु भएको देशको नाम जस्तै : ISREAL (साइप्रसमा नेपाली पासपोर्ट नेपाली दुतावास इजरायल बाट बनेर आउने हुदा )
जारि भएको मिति (नेपाली मिति )
वैवाहिक अवस्था : अविवाहित/ विवाहित वा अन्य ( विदुर वा विधुवा वा डिभोर्स भएको भए अन्य )Occupation(पेशा) Salaried(मासिक तलब पाउनेले यो रोज्ने ) , बिजनेस भए Self Employed , विधार्थी भए Professional वा other रोज्ने
organization name मा कम्पनि वा इम्प्लोयर वा कलेज को नाम लेख्ने
address मा कम्पनि वा इम्प्लोयर वा कलेज को ठेगाना लेख्ने
Designation मा घरेलु कामदार भए DOMESTIC WORKER, विधार्थी भए STUDENT वा आफ्नो पेशा वा पद लेख्ने
Estimated Annual income वार्षिक आम्दानी अनुमानित कति हुन्छ नेपालि रुपैयामा लेख्ने
टेलिफोन मा कम्पनि वा इम्प्लोयर वा कलेज को फोन नम्बर दिने (अनिवार्य छैन )
Family information मा तपाइको (grand father’s name हजुर बुवा को नाम) , ( father’s nameबाउ को नाम ), (mother’s name आमाको नाम ),(spouse name मा श्रीमान् वा श्रीमतीको नाम) र (son/daughter name छोरा छोरी को नाम ) लेख्नुस
Permanent Address मा पासपोर्ट मा वा नागरिकतामा लेखिएको स्थायी ठेगाना भर्नुहोस्।
Current Address मा अहिले आफ्नो साइप्रस को ठेगाना लेख्नुहोस house number, street name, city र country
Source of fund मा Remittance मा मार्क लगाउनुहोस्
Average Expected Transaction per month भनेको मासिक रुपमा कति कारोबार (रकम जम्मा गर्नुहुन्छ वा निकाल्नु हुन्छ ) भन्ने अनुमान छ ? Amount मा रकम लेख्नुस् र no of transaction मा कति पटक कारोबार हुन्छ लेख्नुस। मानौ ३५० युरो पठाउनु हुन्छ भने नेपाली लगभग ४९ हजार हुन्छ। पचास हजार लेख्दा हुन्छ। आफ्नो आम्दानि अनुसार लेख्दा राम्रो हुन्छ। कति पटक पठाउनु हुन्छ वा निकाल्नु हुन्छ त्यो पनि उल्लेख गर्नु पर्छ।
Nature of Transaction मा cash, cheque and Remittance रोज्नुहोस
Are youaNRN? मा No रोज्नुहोस
Do you want Internet Banking Facility? तपाइँ लाइ अनलाइन बैंकिंग सुविधा चाइन्छ ? YES गर्नुहोस्। यो Internet Bankingभनेको यहा बसेर आफ्नो खातामा कति रकम छ ? व्याज कति आयो ? कति रकम जम्मा भयो भनेर हेर्न मिल्छ। तपाइँले यस बाट नेपाल मा हुने विभिन्न सुविधा लिन सक्नु हुन्छ जस्तै : बिजुलीको बिल तिर्न, इ सेवा मा पैसा तिर्न , मोबाइलमा रिचार्ज गर्न, इन्टरनेट को बिल तिर्न, एन्सेल वा NTC मा रिचार्ज गर्न सकिन्छ। (यो सेवा पूर्ण रुपमा चालु गर्न तपाइँ नेपाल नै जानु पर्छ तर यहा बसेर आफ्नो खातामा कति रकम छ ? व्याज कति आयो ? कति रकम जम्मा भयो भनेर हेर्न मिल्छ )
Do you have any bank account’s in any other Bank & Financial Institution in Nepal? भनेको तपाइको नेपालमा अन्य कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै बैंक खाता छ? छ भने yes छैन भने no रोज्नुहोस (यदि तपाइँ संग सानिमा बैंक को खाता पहिला देखि नै छ भने अर्को खाता खोल्न मिल्दैन )
Have you ever been convicted of crime? भनेको के तपाईंलाई कहिल्यै अपराधको दोषी ठहराइएको छ? छ भने yes छैन भने no रोज्नुहोस
अब SAVE AND CONTINUED मा क्लिक गरि अघि बढ्नुहोस।
अब तपाइले आफ्नो पासपोर्ट साइजको फोटो र पासपोर्ट वा नागरिकताको फोटो अपलोड गर्नु पर्छ।
Latest PP size photo मा दिएको SELECT IMAGE मा क्लिक गरि ग्यालेरी मा भएको पासपोर्ट साइजको फोटो हाल्नुहोस
नबुज्नु भएको भए यहा अन्तिम मा दिएको भिडियो मा हेर्नुहोस
त्यस्तै Citizenship Certificate * मा दिएको SELECT IMAGE मा क्लिक गरि ग्यालेरी मा भएको पासपोर्ट वा नागरिकताको फोटो हाल्नुहोस
Source of FCY earning certificate, NRN Card (For NRN only), मा तापाइले केहि अपलोड गर्नु पर्दैन
अब अर्को पेज मा I agree above term and condition मा टिक मार्क लगाई SAVE AND CONTINUED मा क्लिक गरि अघि बढ्नुहोस।
अब यस अघि भरेको सबै बिवरण ठिक छ छैन हेर्नुहोस , केहि गलत भरिएको रहेछ बहने EDIT THIS PAGE मा क्लिक गरि सच्याउनु होस् नत्र सबै मिलेको भए अन्तिम मा रहेको SUBMIT मा क्लिक गर्नुहोस र ओके गर्नुहोस्
अब तपाइले एउटा रेफरेन्स नम्बर Reference Code पाउनु हुनेछ त्यो टिपेर राख्नुस जुन पछी काम लाग्नेछ।
अब १/२ दिन पर्खनु होस्। तपाइँ को खाता खुल्यो कि खुलेन भनेर हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
तपाइँ को खाता को प्रोसेस के हुदै छ भनि Reference Code, जन्म मिति र क्याप्चा भएर TRACK ACCOUNT मा क्लिक गर्नुहोस्।
वा आफ्नो इमेल चेक गर्नुहोस् .
बुझ्नु भएन भने यो भिडियो राम्रो संग हेर्नुहोला। तपाइँ लाइ बैंक खाता खोल्न गारो भयो भने 95908350 मा कल वा WHATSAPP गर्नुहोला हामि मद्दत गर्नेछौ।